Sambany mba nanao fihetsika mendri-piderana ireo polisy. Nahavariana ireo mponina teo Anosy ny nahita polisy efatra mirahalahy nanamboatra ny lalana goaka manoloana ny boriborintany. Asa raha baiko na fandavantena fa izy ireo mihitsy no nandray borety sy nanampina ny lavaka
Niantso ireo mpitsara namany omaly ny mpahay lalàna, Clément John, mba hijoro amin’ny fahamarinana. Tsy tokony ekena, hoy ny fanehoan-keviny, ny fanodinana ireo voka-pifidianana voaray eny anivon’ireo SRMV.
Nahatrarana bileta tokana efa voamarika maromaro ihany koa tamin’iny omaly iny tany Ankilizato. Manararaotra toy ny banga miomehy alina, araka ny fomba fiteny, mihitsy araka izany ireo tsy mataho-tody manambaka ny any Ambanivolo.
Manomboka mampiahiahy ny mpanara-baovao fatratra kosa ankehitriny ny fomba fiasan’ny avy eo anivon’ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana na ny CENI. Tsy matin’ny maro lolo ny rindrambaiko hampiasain’ity vaomiera ity.